Facebook မှာ လူကြိုက်များနေတဲ့ သင်္ကြန်ဓာတ်ပုံ | MoeMaKa Burmese News & Media
“သင်္ကြန်အကြိုနေ့ က တွေ့ ရသော ကိုမင်းကိုနိုင်” ဟု Burma VJ Media Network က Facebook တွင် ဖော်ပြထားသော ဓာတ်ပုံကို စာဖတ်သူအများအပြားက နှစ်သက်နေကြသည်။
အောက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်များ ပေးထားကြသည်။
Daniel Agger သင်္ကြန်နဲ့နောက်ထပ် မဝေးစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ………
Tin Maung Win နှစ်ပေါင်း၂၀ကျော်လောက်ကြာမှပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်ကျရတဲ့ ကျနော်တို့အကိုကြီး လူပျိုကြီးသင်္ကြန်…. 🙂
Jon Lian ပုံမှန်နေနော်….ပြောစရာဖြစ်မယ်….
Foe Pay ဝါးး ဝါး ကဲသာကဲ ကဲသာကဲ နောက်ဆိုပိုကဲ 😛
Kosalal Long ကိုကိုကြီးက sport shirt တွေဘာတွေနဲ့
Amaytar Bocho ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ပထမဆုံးသင်္ကြန်ရေပါခင်ဗျာ
Myo Win မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိသူတွေ ဘာလုပ်လုပ် တင့်တယ်ပါတယ်
Khaing Cho Nyein ဒီမြင်ကွင်းလေး မြင်၇တာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ..
Susu Winaung Nice may you be happy forever …,
အသောက – လတန်ခူးပေမို့ ၊ အလှထူးပါဘိ ၊ မြမြဖူးရယ်တဲ့ ခိုင်ရွှေဝါ။ တကယ်တမ်းသာဖြင့် ၊ ဘယ်ပန်းသော် စံမတူဘု ၊ နန္ဒမူ ဖလ်ဂူထိပ်မှာလပစ္စေကာ ချွေးတော်သိပ်ရတယ် ၊ အေးရိပ်ဆာယာ။ တနှစ်တွင် သည်တလသာပ ၊ တလတွင် တရက်ထဲခက်ခဲတဲ့ ရက်ဗုဒ္ဓါ ၊ ပွင့်ရှာကြ စုံမြိုင်တွင်း။ မြူမ…See More
Latt Latt Po Happy new year
Si Si Win ကိုမင်းကိုနိုင် နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေ….
Daw Molly သင်္ကြန်ရေသန့်စင်အေးချမ်းသလိုကိုမင်းကိုနိုင်အနာဂါတ် လည်းသားရွှေအိုးထမ်းကိန်းမျိုးဖြစ်ပါစေ…
K Ki Ki မင်္ဂလာရှိသော ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းလေးပါ…မြန်မာပြည်သား အားလုံးရဲ့ အနာဂါတ်များ.. နှစ်သစ် သင်္ကြန်ရေ နဲ့ အတူ အေးချမ်းသာယာတိုးတက်ကြပါစေ..
Kanchstar Subbar မင်္ဂလာ ရှိသော နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ။
Hsi Hsie Hsi Hsie I miss thigyan
Aung Ko ကောင်းသောနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေဗျာ။
Aung Ko အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ။
Boat Winwarwartun အကိုရေ မင်္ဂလာပါနော်..ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ..
Soe Myint သမိုင်းဝင် ရေသဘင်ပါ – ၂
Soe Myint သင်္ကြန်ကို နှစ် ၂၀ လောက် သီချင်းသံသာလောက်သာ ကြားဖူတဲ့ သူတစ်ဦးကို ရေလောင်းခွင့်ရတာ
Nyi Latt လူပျိုကြီး ..ကိုမင်းကိုနိုင် … အိမ်ထောင်ပြု တော့ လေ…အသက်လည်း ရလာပြီ .. အမေစု ကလည်း အိမ်ထောင်ပြု ကြဘို့ ပြောနေပြီ .. ဘယ်တော့လည်း ဆိုတာ အကြောင်းလည်း ကြားဦး .. လက်ဖွဲ့ ပို့ မယ် .. မြန်မြန် စီစဉ် တော့ .. လူပျိုကြီး တော့ အဖြစ်မခံ နိုင်ဘူး .. ဒါပဲ .. တို့ အကိုကြီး ကျမ်းမာ ချမ်းသာ ပါစေ…
Wai Mar Pearl dear ko min ko naing…pls get married as soon as possible…we need generation like you…we need blood that very red…may this new year bring you best of luck…suchaperfect thingyan for burma…
Ni Ni Moe အကိုကြီး ဟဲဟဲ
Wynn Yakhine ကျနော့် တို့လေးစားရတဲ့ သူကို ခု လို မြင်၇တာ စိတ်ချမ်းသာမိပါတယ်
13 Responses to Facebook မှာ လူကြိုက်များနေတဲ့ သင်္ကြန်ဓာတ်ပုံ
Nai Kyaw Sein on April 12, 2012 at 11:57 pm
ဒို.အကို ကျောင်းသားကြီး မင်းကိုနိုင် အတာသင်္ကြန်ရေနှင့်အတူ ဘ၀ရှေ့ခရီး သာယာအေးချမ်းပါစေ အမိမြန်မာပြည် ကျောင်းသားများကို ဦးဆောင်ပြီး သာယာအေးချမ်းဖွိ.ဖြိုးတိုးတက်သော မြန်မာပြည်ကြီးဖြစ်လာအောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို. အားလုံးက ဆုတောင်းပေးလျက်။
yawna on April 13, 2012 at 6:05 am
I always respect him and his group .so they never run out to other country. they are real hero and politicians.
မောင်ပျာလောင် on April 13, 2012 at 6:48 am
အကိုကြီး မင်းကိုနိုင် စစ်ကိုမုန်းတယ်ဆိုပေမဲ့ အပျိုစစ်စစ်ကိုတော့ယူပါဗျာ – ရေမရောပါနှင့်၊
ရောပင်ရောလည်း ငါကများ၏ လို့ သံချပ်မထိုးပါနှင့်။ ဧရာဝတီချေကန်ပက်တော့ တစ်ယောက်
မောက်မောက် (ဘိုက်) ခလေးကပ်လာရင်၊ ပြေးပေတော့ အကိုကြီးရေ၊ မင်း ကို – နိုင်ပေမဲ့၊ မ – ကိုနိုင်ဘို့ ခက်တယ်
မိုးစဲ on April 13, 2012 at 8:31 am
အမျိုးသားရေးတာဝန် တရပ်အနေနဲ့ လူပျိုကြီးများ လျှော့နည်းပပျောက်စေရေးကို လုပ်သင့်ပါတယ်..း)
aung on April 13, 2012 at 9:07 am
peggy on April 13, 2012 at 11:11 am
Wishing youahappy Myanmar Thingyun New year and lots of happiness for the future Ko Minn Ko Naing!!!
zypp on April 13, 2012 at 6:03 pm
Itsawonderful picture forahero . u r really hero .
Thutaa on April 13, 2012 at 8:01 pm
Thutaa on April 13, 2012 at 8:03 pm
ko kyel linn on April 13, 2012 at 11:35 pm
Ko Min KO Naing!! Wishing you all the best and May GOD Bless you forever and your groups..Meet and marry with innocent lady or virgin lady as soon as possible….
yinmoesan on April 15, 2012 at 9:23 am
me me on April 15, 2012 at 8:30 pm
Evey body see very happy.
san nay yar on April 20, 2012 at 1:32 am
Please, don’t forget ah may Su’s advise, consider to marry your one of comrades.